Iyo Yakanakisa WordPress SEO Plugin: Chinzvimbo Math | Martech Zone
Tinoziva - nenharembozha uye kutsvaga kuchikosha - kuti unogona kurasikirwa nemazana kana kunyange zviuru zvevashanyi kana nguva yako yekurodha peji ichinonoka kupfuura mukwikwidzi wako… saka kumhanya ndiyo yaive nyaya yakakosha kwandiri.
Iyo wizard yekushandura kubva kuYoast SEO Plugin kuenda Chinzvimbo Math iri nyore. Imwe mukana weiyo plugin ndeyekuti iwe unogona zvakare kuita iyo inopinza uye kutonga yako saiti redirect. Ndinoshuva kuti vape mapoka kuti varonge maredirects ako, asi kuderedza huwandu hwemapulagi kwakakodzera kurasikirwa kwechinhu ichocho.
Mushure megore rinopfuura rekushandisa plugin iyi, ndakakwidziridza kune yakabhadharwa vhezheni uye ndakatamisa vese vatengi vangu kwairi. Ndavandudzawo runyoro rwangu rwekurudziro rwe WordPress plugins ebhizinesi neRank Math sechinotsiva Yoast uye Kudzorerwa. Ndine chokwadi chekuti uchaona zvinobatsira.
Tags: affiliateyakanakisa wordpress seo pluginkuongorora zvemukatimazwi akadzamarank masvomhuseo pluginSitemapsWordPressWordpress pluginwordpress seoxml sitemapsyoast